दुनियाकै सबैभन्दा बढी समय सुत्ने यि महिलाबारे जान्नुहोस् अनौठो सत्य – दैनिक नेपाल न्युज
एजेन्सी । तपाई २४ घण्टामा कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? ८ १० वा १२ ? तर क्यानडाकी एक महिला भने २४ घण्टामा २२ घण्टा नै सुत्छिन् ।क्यानडाको नोवा स्कोटियाकी ३७ वर्षीया हिथर रिड वास्तवमा कलियुगकी कुम्भ कर्ण नै भएको क्यानडाको मिडियाले उल्लेख गरेको छ ।
ति महिलाको यो कुनै रहर नभई रोग भएको र बाँकी रहेको २ घण्टा पनि उनी अर्ध चेतन अवस्थामा हुन्छिन् । वास्तवमा उनी स्लिपिंग ब्यूटी सिन्ड्रोम नामक स्नायु रोगबाट ग्रसित भएका कारण यस्तो भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाई छ ।